ရေရှည်ပြောင်းလဲမှုအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး (၅)ခု
ပြောင်းလဲမှုအတော်များများဟာ အချိန်ယူရပါတယ်။ သင်ဟာ ပေါင် ၅၀ လောက် ၀ိတ်ကျဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အကြွေးတွေ မရှိအောင် ကြိုးစားနေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကြီးကြီးမားမား ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ဥပမာ- စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ကို အသစ်ပြန်ဆောက်ဖို့။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီရည်မှန်းချက်ဟာ သင့်ဘ၀မှာ ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ဖြစ်စေမယ်လို့ သင် သိပါတယ်။
အဲဒီရည်မှန်းချက်ကို ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ရာ အကြောင်းပြချက်တွေလည်း သင့်မှာ ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေက ဘယ်တော့မှ မလုံလောက်ပါဘူး။
သင့်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်စေမယ့် အလုပ်တွေကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်သွားဖို့ဆိုတာ အမှန်တကယ်ပဲ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – သင်ဟာ ပေါင် ၅၀ လောက်ဝိတ်ချဖို့ ရည်မှန်းတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီကနေ့အတွက် အချိုပွဲလေးကို မစားဘဲနေလိုက်ဖို့ဆိုတာ ပေါင် ၅၀ ၀ိတ်ကျဖို့ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်အတွက် သိပ်အရေးမပါလောက်ဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း သင်ဟာ သင့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါပဲ။
အကြွေးဒေါ်လာ သုံးသောင်းကို ဆပ်ဖို့ လိုနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် ငါးဒေါ်လာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ချွေတာဖို့ဆိုတာဟာလည်း သိပ်အရေးမပါဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်တိုင်းဟာ ဒီလိုမျိုး ခြေလှမ်းသေးသေးလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှသာ အောင်မြင်သွားတာပါ။ သင် ပုံမှန်စားနေကျ အစားအစားတွေထဲမှာ အချိုပွဲလေးတစ်ပွဲလောက် လျှော့စားလိုက်တာဟာ ၀ိတ်ချဖို့အတွက် သိပ်အရေးမပါဘူးလို့ ထင်ရတာတော့ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အချိုပွဲတွေ စားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ရေရှည်မှာ ၀ိတ်ချဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပါပဲ၊ သင့်မှာ အကြွေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်၊ ငါးဒေါ်လာလောက် သုံးလိုက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေ သေးသေးလေးတွေ စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ အကြီးကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ သင်ဟာ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက် ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုရင် ဒီ နည်းလမ်းငါးခုထဲက တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၁။ သင့်ရဲ့ “ဘာကြောင့်” ဆိုတာကို ချရေးပါ
သင့်မှာ ပြောင်းလဲမှုအတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အများကြီးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာရွက်တစ်ရွက်ကို ယူလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲ document တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာ သင့်အတွက် ဘာကြောင့်အရေးရသလဲဆိုတာကို အတိအကျ ချရေးပါ။ အဲဒီပြောင်းလဲမှုကနေ ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ? သင် မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာမလဲ ?
အဲဒါတွေကို သင်ဟာ စာရင်းတစ်ခုလို list လုပ်ပြီးလည်း ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ဘ၀ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ အဲဒါကို စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်လိုလည်း ချရေးနိုင်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက် – ပေါင် ၅၀ ၀ိတ်ကျရန်
– ပိုပြီးတော့ ကျန်းမာလာမယ်
– ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ကျနလာမယ်
– ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိမယ်
– ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိလာမယ်
ဒါမှမဟုတ် စာပိုဒ်နဲ့ ရေးမယ်ဆိုရင်- ဥပမာ –
“ ငါ့မှာ အကြွေးတွေမရှိတော့ဘူး။ ငါ အများကြီး ပိုပြီး ပျော်ရွှင်လာတယ်။ ညမှာလည်း ပိုပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တယ်။ အတက်အကျ နည်းနည်းလေးတွေက ငါ့ကို စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ အခုဆို ငါ့မှာ ရွေးချယ်စရာတွေလည်း အများကြီးရှိလာပြီ။ ”
၂။ လွယ်နိုင်သမျှ လွယ်ကူအောင် လုပ်ပါ
ပြောင်းလဲမှုအားလုံးဟာ အလုပ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ အလုပ်တွေကို ပိုပြီးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်လေ၊ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်လမ်းကြောင်းမှာ ဆက်ရှိနေဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုရလေပါပဲ။ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရဲ့အစမှာ အချိန်နဲ့ ခွန်အားတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဟာလည်း ထိုက်တန်ပါတယ်။
သင်ဟာ အစားအသောက်မှာ ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် ပုံမှန် သင်ချက်ပြုတ်နိုင်မယ့် ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအစားတွေကို ဘီရိုထဲမှာ ထည့်ထားပါ။ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ဘီရိုထဲမှာ အဲဒီအစားအစာတွေဟာ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့အတွက် တခြားအရာတွေကို မချက်ပြုတ်မိတော့ပါဘူး။ ဒါဟာ ပိုပြီး လွယ်ကူစေပါတယ်။
၃။ ရှေ့တစ်မိုင်အတွက်သာ ရည်မှန်းပါ
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ဟာ အရမ်းအလှမ်းဝေးနေတော့ သင် အဲဒါကို မမြင်နိုင်ပါဘူး။
ရည်မှန်းချက်က ကြီးမားလွန်းနေတဲ့အခါ အဲဒီရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်ဖို့ လတွေ၊ နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားလိုက်ရင် စိတ်ဓာတ်ကျစရာပါပဲ။
အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ကို စိတ်ပူနေမယ့်အစား ရှေ့တစ်မိုင်ကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဥပမာ – သင်ဟာ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးဖို့ရည်မှန်းထားတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ ပထမဆုံးတစ်မိုင်ဟာ စာမျက်နှာ ၁၀ မျက်နှာလောက် စရေးဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ အဲဒီနောက် နောက်ထပ် ၁၀ မျက်နှာ။ အဲဒီလိုမျိုး ရှေ့တစ်မိုင်ချင်းစီကို အာရုံစိုက်သွားပါ။
၄။ အောင်မြင်မှု ကြိုးတန်းကို တည်ဆောက်ပါ
သင်ဟာ စပြီးတော့ အောင်မြင်ပြီဆိုရင် သင့်ကို အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေစေမယ့် အရာမှန်သမျှကို လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်အတွက် သင် အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့ရက်တွေကို နေ့စဉ် သို့မဟုတ် အပတ်စဉ်တိုင်း ပြက္ခဒိန်မှာ မှတ်သားထားပါ။
သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးဖို့လို့ ဆိုကြပါစို့။ ဒီတော့ သင်ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စာလုံးရေ ၃၀၀ လောက် ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာ အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး ( ဒီစာရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိပါတယ် )။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စာလုံးရေး ၃၀၀ ဟာ (၇)လအတွင်းမှာ စာလုံးရေ ခြောက်သောင်းရှိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင် စိတ်မပါတဲ့အခါမျိုးမှာ စာရေးဖို့ အာသီသမရှိဘူးဆိုရင် အဲဒီနေ့တစ်နေ့ကို စာမရေးဘဲ နေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကို ပြက္ခဒိန်မှာ မှတ်သားမထားပါနဲ့။
သင့်ရည်မှန်းချက်အတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့ နေ့ရက်တွေကိုသာ မှတ်သားထားပါ။ သင့်ရဲ့ ပြက္ခဒိန်က အမှတ်အသားလေးတွေဟာ ကြိုးတန်းလေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အဲဒီကြိုးတန်းလေးကို ဖြတ်ပစ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၅။ သင့်အောင်မြင်မှုကို ဆင်နွှဲပါ
သင်ဟာ သင့်ရည်မှန်းချက်အတွက် တစ်ခုခုကို အောင်မြင်တဲ့အခါတိုင်း အဲဒီအောင်မြင်မှုကို ဆင်နွှဲပါ။ ညစာထွက်စားပါ။ သင် သိမ်းထားတဲ့ ၀ိုင်ကောင်းကောင်း တစ်ပုလင်းကို ဖွင့်သောက်ပါ။ စာအုပ်အသစ်တစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ် DVD ဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားကြည့်ပါ။ အပန်းဖြေခရီးထွက်ချင်ထွက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့် ငွေကြေးအခြေအနေအရ အဆင်ပြေမယ့် တစ်ခုခုကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တခြားလူတွေလည်း သိပါစေ။ Facebook မှာ ကြေညာလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့်အောင်မြင်ခဲ့တာကို Blog ရေးပါ။ သင့်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ “Congratulations!” မက်ဆေ့ခ်ျတွေကို အများကြီးရမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ အခြားလူတွေကို သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းပြပေးလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Credit:Your Life Success
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-e_HTLLvv-Ug/XEBVDM07tMI/AAAAAAAB758/SatxjilgwJ4I0fUWpMWBpMrID4SOyT-CgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg" alt="“အချစ်ကြီးသလောက် အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး”">
Phothutaw လွန်ခဲ့သော6နာရီခန့်က
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-eBcgIGqcyoI/XEBDdKQJ2mI/AAAAAAAB75E/b5_65wab0ZYzhJNNT7efgkNfUFFpgkT8ACLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg" alt="သောတာပန်သေပြီးနောက် ဘာဖြစ်မလဲ !">
သောတာပန်သေပြီးနောက် ဘာဖြစ်မလဲ !
Phothutaw လွန်ခဲ့သော7နာရီခန့်က
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-JVAtRh9MoEQ/XEBBaGINwuI/AAAAAAAB744/oUDEmMPPuU4D5oNnVIRufmbiWScWI7xGwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/178535280.jpg" alt="ရည်းစားမထားခင် ကြိုတွေးထားသင့်သော အချက်(၅)ချက် !">
ရည်းစားမထားခင် ကြိုတွေးထားသင့်သော အချက်(၅)ချက် !